ဒီဇင်ဘာလကုန်တွင် တစ်သောင်းတန်များထုတ်တော့မည်ဟု သတင်းထွက်ပေါနေပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဒီဇင်ဘာလကုန်တွင် တစ်သောင်းတန်များထုတ်တော့မည်ဟု သတင်းထွက်ပေါနေပြီ
ဒီဇင်ဘာလကုန်တွင် တစ်သောင်းတန်များထုတ်တော့မည်ဟု သတင်းထွက်ပေါနေပြီ
Posted by darkoosky on Dec 3, 2010 in News | 13 comments
လာမဲဒီဇင်ဘာလမှာ ကျပ်တစ်သောင်းတန်တွေထုတ်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီက ဖေါ်ပြလိုက်တယ်။ မကြာခင်မှာပင် ဈေးနှုန်းတွေတက်လာပြီး ငွေကြေးဖေါင်းပွမှုတွေ ပိုမိုလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ အောက်ခြေ လူတန်းစားတွေအနေနဲ့ တကယ်ကြီးမားတဲ့ ပြသနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ နှစ်ရာတန်တွေလည်းပျောက်ကွယ်တော့မှာဖြစ်ပြီး ငါးရာတန်ကို အသေးသုံးထားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲထင်မြင်ချက်လေးတွေကြားချင်တယ်
လူပမာကို တော့ အသက်ကယ်ဆေးတိုက်နေပြီ ..
အောင်မလေး တကယ်ထုတ်တော့မှာလား ………မီးတို့က (5000) တန်တောင် ခဏခဏ ကိုင်ဖူးတာမဟုတ်ဘူး။ လခါထုတ်မှ ခဏကိုင်ဖူးတာ ။ (10000) တန်ထွက်လာရင် ခဏပေးကိုင်ကြပါအုံးနော် .. mandalaygazette အဖွဲ့သားအချင်းချင်း စာနာမှုနဲလေနော်။
၅ထောင်တန်ကိုတောင် မှင်ခြစ်ရာလေး ရှိရင် မယူချင်ဘူး။ လာအုန်းမယ် ၁သောင်းတန်တဲ့လား.. သန့်သွားအောင် ရေလျှော်လို့ရတဲ့ ပလပ်စတစ်လောင်းပြီး ထုတ်သင့်တယ်။
(၅၀၀၀ိ) တန် တစ်ရွက် ရေစိုလို့ နေလှန်းပြီး အစိုးရဘဏ်ကိုသွားလဲတာ လုံးဝမရပါ။ ဆူး ပြောသလိုသာ တစ်သောင်းတန်ကြီး တွေထုတ်ခဲ့ရင်ဖြင့် ပလပ်စတစ်ပါတစ်ခါတည်းလောင်းထုတ်ပေးရင် ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်..။
လုပ် သာ ချလိုက် မင်း အကြိုက် ၊ မင်းအကြိုက်။
~~~ မင်း လုပ်ချင် ရာကို လုပ်လိုက် တော့၊…. မင်း ကောင်း မယ်ထင် ရင်လုပ် လိုက်ပေါ့၊ …..မင်း အတွက်ဆို ငါ တ သက်လုံး ~~~
တစ်သောင်းတန်မှာ ဒီတခါ ပါမဲ့ တိရိစ္ဆာန်က ကြံ နဲ့ ဖွတ်တဲ့ဗျာ။ ကြံဖွတ်ကို ဂုဏ်ပြုပြီး တစ်သောင်းတန်မှာ ဖွတ်ပုံနဲ့ တဖက်မှာ ကြံပုံနဲ့ ထုတ်မှာတဲ့ ဟိုနေ့က မြန်မာအသံသတင်းမှာ ကြော်ငြာသွားတယ်။
မြန်မာ့အသံ သတင်း မကြည့်သူတွေတော့ လွတ်သွားပြီဗျာ..။ နောင်တရကျဗျာ…။ နောက် ထွက်လာမှဘဲ ကြည့်တော့ ပေါ့ဗျာ။
လူထုဆီက အခွန် အမှန်အကန်ကောက်ဖို့ .. မစွမ်းသာတဲ့အစိုးရဟာ ..အသုံးစရိတ်တွေအတွက် … ဒီလိုပဲလုပ်ရမှာပါပဲ..။ ငွေစက္ကူတွေလှိမ့်ထုတ်လိုက်…။ ဆဲလ်ဖုန်း၊ ဓါတ်ဆီ၊ ကား စတာတွေကို လူထုကိုပါမစ်ချပေးပြီး ငွေတွေပြန်သဲ့ယူလိုက်နဲ့ .. လှည့်မှာပါပဲ..။
တကယ်တေ့ာ ..အခုအာဏာပိုင်တွေက အစိုးရမဟုတ်တဲ့အတွက် .. ငွေစက္ကူထုတ်ခွင့်မရှိဘူးလို့ ..ရိုးရိုးပဲမြင်မိတယ်.။ နောင်တက်လာမဲ့ အစိုးရက လုပ်ရမှာလို့ ထင်တယ်..။
ငါးထောင်တန် ထွက်ပြီး ဘာမှ မကြာသေးဘူး .. အတုထွက်တယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ပြီး ငါးထောင်တန်ကို လက်ထဲ သိမ်းမထားချင်သူတွေ များလာတယ် ..
တစ်သောင်းတန် ထွက်မယ် ဆိုတော့ .. ဧကံတ .. နောက်တက်လာမယ့် သမ္မတသစ် ဦးသောင်းကို ဂုဏ်ပြုမလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် .. (ရုပ်ပုံကတော့ မန္တလေးသား ရေးသလို ကြံ့ နဲ့ ဖွတ်ပေါ့)
ဦးသန်းရွှေကို ဂုဏ်ပြုချင်ရင် တစ်သန်းတန် ထွက်မယ် … (ရုပ်က ၀၀၀၀၀၀၀က် များ ဖြစ်မှာလား ..)
ဦးသိန်းစိန်ကို ဂုဏ်ပြုချင်ရင် တစ်သိန်းတန် ထွက်မယ် .. (ခေါင်းမွေးမရှိတော့ .. လဒများ ဖြစ်မှာလား ..)
လူကြီးတွေကို ပြစ်မှားရင် အပြစ်ကြီးတယ် တဲ့ .. ဘွာတေး ဘွာတေး
ဘယ်သူမှ ကုဋေပါအောင် မမှည့်ထားတဲ့ စစ်တပ်ကို နာကျည်းတယ် ..
(မှတ်ချက် ။ ။ တစ်ကယ် ရှိ မရှိ မသိသေးပါ .. အခုခေတ်က မှည့်ချင်သလို မှည့်ကြတာ)
တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ 10000တန်ပေးပြီးလိုင်းကားတိုးစီးရအုံးမှာပေါ့ နော်။10000တန်ကောအတုထွက်အုံးမှာလားဟင်။။။။
10000တန်ထွက်လာရင် ငွေသိမ်းရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေသတိထားဖို့လိုတယ်။ တစ်ရွက်လောက်ပျောက်ရင်တော်တော်ထိသွားမယ်နော်။
နေ၀န်းနီရယ် .. ဂျပန်ခေတ်ကို ရောက်သွားတော့မယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာလား ..??????
doekalay ရေ ဘယ်လောက်တန်ဖြစ်ဖြစ် အတုကတော့ထွက်မှာပဲ… အခုတောင် ဘဏ်မှာ 500 တန်စုတ်ရင်တောင် လဲမပေးပဲ ယူထားတာ…5000/ – 10000/ တွေ ထပ်ထွက်လာရင် ဘဏ်က ၀န်ထမ်းတွေတော့ သူဌေးဖြစ်တော့မှာပဲ